XZ450Plus HDD rig is isku-dhafan is-raran loogu talagalay oo leh wareegyo xiran iyo nidaam hawo, nidaamka xakamaynta culeyska dareemayaasha. Qaybaha ugu muhiimsan ee nidaamka Haydarooliga, nidaamka korontada iyo nidaamka gudbinta waa nooc heer-sare ah sumad gudaha iyo caalami ah, iyo kalsooni sare.
Astaamaha Hordhaca XZ450Plus HDD
1. qaadashada wareegga keydinta tamarta xiran, xakamaynta xasaasiga ah, xakamaynta korantada iyo korantada iyo tiknoolajiyada kale ee horumarsan, qaybaha la keeno, tayada la isku halleyn karo;
2. Qalabka riix-riix-riix si loo hubiyo xasilloonida hawlgalka awoodda madaxa iyo kalsoonida gudbinta. Madaxa awoodda sabeynaya ayaa si weyn u ilaalin kara dunta tuubada layliga waxayna hagaajin kartaa nolosha adeegga tuubada layliga;
3. qaybaha ugu muhiimsan waxay doortaan soosaarayaasha qaybaha hidaalka ee heer caalami iyo heer caalami, waxay hagaajiyaan isku halaynta alaabada;
4. xulashada madaxa kororka kororka korontada, laba jibaar madaxa madaxa jiidista si loo daboolo baahiyaha gaarka ah ee macaamiisha;
5. konsole waxaa loogu talagalay ergonomics, taas oo ka raaxo badan oo ku habboon;
6. xakamaynta qadka si loo hubiyo amniga geedi socodka.
7. mashiinku wuxuu la kulmi karaa gaadiidka weelka (si buuxda otomaatig uma ahan).
QSC8.3-C260Engine Shiinaha Ⅲ
6CTA8.3-C26 0Engine Shiinaha II
QSB6.7-C260Engine Shiinaha Ⅲ, EU Stage IIIA
2 tan Loader Crane
3 tan Loader Crane
Nidaamka dhoobada 600L / min bamka dhoobada
450L / min bamka dhoobada
Pipeloader Semi-otomaatiga dhajiska ah
Tuujiye-buuxa oo otomaatig ah (Ubaahan ikhtiyaar 3t loo baahan yahay Loader Crane)
Cab iyo qaboojiye
Teendhada mashiinka fudud
Xakamaynta Khadka Khadka Socodka Socdaalka fiilada
Xoogagga XZ450XZ450Plus Jiidida ugu badan Max. Soo jiidashada Ciidanka kN 960
Alaarmiga shoogga korantada Ilaalinta shoogga korantada
Wareeg, riix / Jiid saar Danfoss
Wareeji / Jiid Madax Danfoss
Gawaarida Wareegga Gawaarida Liyuan / Huade
Gawaarida Gawaarida / Gawaarida Gawaarida Liyuan / Huade
Yaraynta Xawaaraha Gawaarida Bonfiglioli / Brevini / XCMG
Silsiladda Haydarooliga XCMG
Tube Haydarooliga XCMG
Socodka Mashiinka / Xawaaraha Xawaaraha Eaton
Liiska wax lagu rakibo waxaa la siiyaa XZ450Plus HDD, oo ay ku jiraan dokumentiyada farsamada:
Shahaadada Badeecada / Buugga Tilmaamaha / Hawlgalka iyo Buugga Dayactirka ee Mashiinka / Buugga Hubinta Tayada ee Mashiinka / Hawlgalka iyo Buugga Dayactirka ee Buugga Waxbaarsha Buugga / Buugga Tamarta Buugga
Hore: XZ420E qoditaanka jihada jihada jihada ah
Xiga: XZ680A Riigga qodista jihada jihada
mashiinka qodista borewell
Mashiinka Mashiinka Qodida Mobile
HDd rig, mashiinka qodista hdd, mashiinka qodista ceelka, Qalab Qodista Jihooyinka Horizontal,